N'ogbe PET Cup lids Manufacturer and Supplier | Copak
PET Cup mkpuchi
Shanghai COPAK ụlọ ọrụ co., LTD bụ ọkachamara ụlọ ọrụ maka nri ọkwa PET ihe onwunwe ngwaahịa. Ọkachamara na PET ihe ọ drinkụ drinkụ cup, PET ice cream cup, PET seasoning cup, PET deli food container, PET qayb cup, PET karama na na. N'eziePET IWU Lids A na-enye ngwaahịa niile anyị na-agbaso ụkpụrụ ogo mba ụwa ma nwee nnukwu aha na ahịa dị iche iche n'ụwa niile.
1.Color: Crystal-doo anya, ma ọ bụ omenala e biri ebi
4. Ojiji: PET CUP
5. Ngwugwu: 1000PCS / CTN
8. Ojiji okpomọkụ: Inogide na mgbape na-eguzogide, friza-eguzogide
PP: -20 ° C ~ 120 ° C, PS: 0 ° C ~ 75 ° C ° C, PITA: -30 ° C ~ 70 ° C
Shanghai COPAK ụlọ ọrụ co., LTD bụ ọkachamara ụlọ ọrụ maka nri ọkwa PET ihe onwunwe ngwaahịa. Ọkachamara na PET ihe ọ drinkụ drinkụ cup, PET ice cream cup, PET seasoning cup, PET deli food container, PET qayb cup, PET karama na na. N’ezie ngwaahịa anyị niile na-agbaso ụkpụrụ ogo mba ụwa ma nwee ọmarịcha aha na ahịa dị iche iche n’ụwa niile.
Anyị bụ otu n'ime ndị kachasị mma maka PET CUP na china. Na morden omumuihe, elu tech akụrụngwa, mara na ala na gburugburu ebe obibi, na nlezianya àgwà akara usoro, anyị PITA iko na karama e exported n'ụwa nile.
Companylọ ọrụ anyị na-ejigide nkwenye nke "Imekọ ihe ọnụ n'eziokwu, qualitydị mma kacha mma, ọrụ magburu onwe ya". Anyị na-agbasi mbọ ike ịnye ngwaahịa na ọrụ ka mma.
Na-atụ anya iso gị nwee mmekọrịta mmekọrịta. Ọ ga-abụ mmeri-mmeri imekọ ihe ọnụ.
Dị ka PITA PUPUlids, anyị mepụtara ọtụtụ ihe nakawa etu esi nke ewepụghị na dome mkpuchi. Obosara dịgasị site nha 4.5mm, 6.2mm7.4mm, 7.8mm, ruo 90mm na 98mm na na. Na dayameta nkePITA cup lidsna-adabere n’ọnụ ọnụ PET cup n’onwe ya. N'agbanyeghị ụdị nke ị ga - ahọrọ, ha niile kwekọrọ na mpịakọta mpịakọta nke PET cup ọma. N'ihi ya, enweghị leakage bụ Basic mma nkwa.
Nabata ileta ụlọ ọrụ anyị. Ozugbo i nyere anyị aka, ị ga-aghọta uru ọ bara uru.
Mkpado okpu: PITA cup lids, PET CUP, win win CoOPERATION, NO LEAKAGE, AKWREKWỌ CREAM PITA CUP
Nke gara aga: PITA ice cream
Osote: PITA na-atọ ụtọ Cup
Ultra Clear iko
PITA Cup 16oz
Crystal Clear plastic iko
PITA Cup Na China